sheeko qosol badan – Filimside.net
Waxaa la yiri oday ayaa intii uu noolaa shaqaynayey hantida uu shaqaystayna meel ayuu ku kedsan jiray.
odayga waxa uu ahaa bakhiil aad u xun waxa uuna ilaashan jiray lacagtiisa isaga oo aad u jeclaa.
inta uusan dhiman ka hor ayuu islaantiisa ku yiri ”hadda i dhagayso haddii aan dhinto lacagtayda oo dhan waad qaadaysaa waxaadna ii dhex dhigaysaa qabrigayga waayo waxaan rabaa inaan lacagtayda aanan aduunka oga tagin”.
islaantiisu waa ay ka yeeshay inay samayso dardaaranka odaygeeda oo ay fuliso iyadoo ugu dhaaranaysa.
odaygii waa uu dhintay waxaan loo dareeray aaskiisii markii aaska la joogo ayaa islaantiis timaaday iyada oo wadata sanduuq yar wadaad meesha ka dhowaa ayey ku tiri fadlan sanduuqan qabriga dhex dhig.
wadaadkii ayaa weydiiyey ”oo maxaa ku jira”, waxay tiri ”waa xaajigayga lacagtiisii oo dhan”, ”oo ma waxaad i leedahay lacagtii odayga oo dhan waxaan raacin qabrigiisa” ayuu wadaadkii yiri, say teen ”maya acagtii waxaan dhigtay bank odaygana waxaan u qoray check”
Naga xishooda waxaad rabtaan miyaad soo qoraysaan